Tantara fohy momba ny foko indizeny Seediq any Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Mponina miisa 25.000 monja no mampiasa ny fiteny Seediq tandindonin-doza
Voadika ny 02 Septambra 2019 7:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Ελληνικά, русский, Esperanto , čeština , English
Trano Seediq nentim-paharazana. Sary avy amin'i Kaisanan Ahuan. Nahazoana alàlana.
Feno ohatra momba ny tolona nataon'ny vahoaka indizeny manoloana ny mpanjanaka ny tantaran'ny olombelona. Manana tantara mitovy amin'izany ny foko Seediq, iray amin'ireo foko indizeny ao Taiwan, rehefa nitolona ho amin'ny zon'izy ireo izy ireo manoloana ny mpanjanan-tany Japoney izay nibodo ny nosy tamin'ny taona 1895 ka hatramin'ny taona 1945.
Ankehitriny, noferana ho 8.994 fotsiny ny isan'ny vahoaka foko Seediq ary nosokajiana ho fiteny tandindonin-doza ny fitenin'izy ireo .
Sady ilazana ny vahoaka no hilazana ny fiteniny ny teny hoe “Seediq”. Anisan'ny fianakavian'ny fiteny Aostroneziana ny fiteny Seediq ary fitenim-paritra telo lehibe no mamorona azy dia ny “Truku”, “Toda” ary “Tgdaya”. Hifampizaran'ireo foko Truku (na Taroko) ihany koa ny fitenim-paritra Truku.
Tsy nahalala i Betcha fa manana foko indizeny maro i Taiwan. Indro ny iray, ny Seediq 賽德克 族 Foko Indizeny ao Taiwan
Talohan'ny nanafihan'ny Japoney an'i Taiwan tamin'ny taona 1895, nipetraka tao an-tendrombohitr'i Wushe ny vahoaka Seediq izay niainan'izy ireo nahaleotena sy nitokana tamin'ny tontolo ivelany. Ny vahoaka Seediq dia fantatra tamin'ny endriny misy tombokavatsa sy sary miavaka .
Tanànakely any an-tendrombohitr'i Wushe. Sary avy amin'i Kaisanan Ahuan. Nahazoana alàlana.
Miaina mahaleotena sy mizakatena tsy misy fitsabahana avy ety ivelany ny foko; na izany aza, nikorontana izany rehefa nanafika an'i Taiwan ny Japoney . Nomarihin'ny fifandonana ny fifandraisan'ny mpanjanaka Japoney sy ny vahoaka indizeny ao Taiwan satria maro ny vondrom-poko no nanohitra ny fibodoana ny nosy. Fantatra amin'ny anarana hoe voina Wushe (na voina Musha) ny iray tamin'ireo fifandonana lehibe.
Tamin'ny taona 1930, nanapa-kevitra ny hanafika ny Japoney ny vahoaka Seediq izay notarihin'i Mona Rudao, nandritra ny hetsika ara-panatanjahantena iray nataon'ny Japoney tao an-tanànakelin'i Wushe. Tamin'io andro io, tafiditra tao amin'ny faritra fitahirizana fitaovam-piadiana tsy nisy mpiambina ireo mpikomy ary nahafaty olona miisa 134, anisan'izany ny zaza amam-behivavy. Nahery vaika ny valiny avy amin'ny tafika Japoney rehefa nandefa miaramila izy ireo mba hifehezana ny fikomiana. Niady ny Seediq ary resy tamin'ny farany. Lasa manamarika ny ady ho an'ny zon'ny vahoaka indizeny ny fanoherana na izany aza, izay niseho nandritra ny ady tamin'ny Japoney tamin'ny volana Desambra 1930.
Tao amin'ny antsafa iray tao amin'ny YouTube, manazava ny fomba nijoroan'ny vahoakany eo amin'ny tantara i Takun Walis, taranaky ny foko Seediq:
Mitoetra mandrakizay ao amin'ny sarimihetsika ihany koa ny voina Wushe. Ny sarimihetsika Warriors of the Rainbow: Seediq-Bale” (midika hoe “tena Seediq na tena olona” ny hoe Seediq Bale) izay notontosain'i Wei Te-sheng dia nalaina avy amin'ny tantaran'ny voina Wushe. Ireo mpilalao miteny ny teny Seediq no mampiavaka an'ity horonantsary ity. Nahazo laza tao amin'ny vondrom-piarahamonina Seediq ilay sarimihetsika ary nomena ny anarana Liona Volamena tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika tao Venizy tamin'ny taona 2012 .
Sary hosodoko amin'ny rindrina ao an-jaridainan'i Nantou ho fahatsiarovana ny voina Wushe. Sary avy amin'i Kaisanan Ahuan. Nahazoana alàlana.
Tao anatin'ny fitopolo taona farany, nosokajiana tamim-pahadisoana ho toy ny zana-bondron'ny vahoaka Atayal ny fokom-bahoaka Seediq mba hanamorana ny fitantanana azy ireo hatramin'ny nahatongavan'ny Kuomintang tany Taiwan tamin'ny faramparan'ny taompolo 1940. Tamin'ny volana Aprily 2008, nahazo fankatoavana ofisialy ihany ny foko Seediq ho vondrona indizeny faha-14 ao Taiwan.
Sary hoso-doko amin'ny rindrina mampiseho ny foko Seediq. Sary avy amin'i Kaisanan Ahuan. Nahazoana alàlana.
Andalam-piverenana indray ny foko Seediq tao anatin'ny taona vitsivitsy noho ny ezaka famelomana aina indray ny fomban-drazana nataon'ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina ary nitondra ny zavakanto Seediq ho an'ny besinimaro.
Na izany aza, mbola miatrika fanamby ny vahoaka Seediq sy ny fiteniny satria maro ireo vahoaka indizeny Taiwaney no voatery nianatra ny fiteny Mandarin sy ny teny Anglisy hahazoana hirika ara-tsosialy sy toekarena ary fanabeazana tsaratsara kokoa.
Ao anatin'izany, ilaina ny tahirin-kevitra nomerika amin'ny fiteny izay misy rakipeo sy lahatsary mba hitazomana izany ho an'ny taranaka manaraka. Ahitana ny fanadihadiana an-taratasy mitondra ny lohateny hoe ” Avy amin'ny Fitiliana mankany amin'ny Drafi-panavaozana: Fandinihana Ara-psikolojika momba ny Fivoaran'ny Fiteny, ny Fahaizana miteny ary ny Famolavolana ny Fiteny Truku Seediq” nataon'i Apay Ai Yu Tang ny asa nisongadina momba ny foko Seediq. Manolotra ny fomba hanohanana ilay fiteny ny antontan-taratasy. Ahitana ny Bokinkira Turku (1994), Chang (2000), ny rakibolana fintina Turku (2006), sns ny sasany amin'ireo tahirin-kevitra efa misy. Nanao ezaka.maro tamin'ny dingana fanadihadiana momba ny fiteny ny Departemantan'iny Fiteny ao amin'ny Oniversiten'i Hawai sy ny Foibe Fiofanana ho an'ny Fandalinana ny Fiteny ao amin'ny Fikambanan'ny Siansan'ny Fiteny ao Hawai. Na izany aza, mbola betsaka ny zavatra tokony hatao mba hiarovana ny fiteny Seediq tsy ho faty.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Terau Leau sy Kaisanan Ahuan avy any Taiwan.